Iprofayile yenkampani-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd.
Gxila kuyilo lwesakhiwo sentsimbi kunye neenkonzo zokwakha
I-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd. (ebizwa ngokuba yi-Honghua) yinkxaso-mali yokwakha ye-Guangdong Huayu Steel Structure Co., Ltd. i-Huayu sisiseko sokukhanya kunye nesinyithi esisebenza ngesinyithi esigubungela ummandla we-0.15 yezigidi zemitha. Imveliso yonyaka yenkampani inokufikelela kwi-0.15 yezigidi zeetoni. Le nkampani babe isiqinisekiso yokuqala-iklasi Structure Umakhi kwaye iziseko kungamampunge ebalulekileyo eMzantsi China. Ukugxininisa kwenkampani kuphando lwetekhnoloji yeentlobo ezahlukeneyo zesakhiwo sentsimbi yophando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kwaye yinkampani ekhokelayo kolu shishino. Njengecandelo lolwakhiwo oluncedisayo lweQela, uHonghua unesidanga seKontrakta yoLwakhiwo lwensimbi, iklasi yesibini yodidi loYilo loYilo, ikontraka yokuqala yekharityhulamu yoKwakha oBambeleyo, iprojekthi yokuqala yokuhombisa ikontrakta yoBuchule, iProjekthi yoKhuselo lokusiNgqongileyo yokuqala. Ikhontraktha, ikontrakta yeProjekthi yeSiseko sokuqala, ezeZindlu zodidi lwesibini kunye neKontrakta ngokubanzi, ikontraka yeProjekthi kaMasipala yodidi lwesibini, iinkonzo zabasebenzi, njl.
Inkampani iye yaqhubela phambili izixhobo zokuvelisa, imigca yemveliso kunye nenani labasebenzi bokwakha be-R & D. I-Honghua inokuzenzela kwaye ifakele zombini isakhiwo sentsimbi esonyukayo (ezinje ngezakhiwo zeofisi zorhwebo, iihotele, indawo yokuhlala ephezulu) kunye nesakhiwo sentsimbi sokwakha (njengesikhululo seenqwelomoya, iziko lemiboniso kunye nebala lemidlalo). Ngapha koko, asinakho ukwenza nje kuphela kwaye sifakele ulwakhiwo lwensimbi ekhanyayo (njengazo zonke iintlobo zezityalo zeshishini, ukugcinwa, ivenkile enkulu), kodwa sinako nokuqamba ibhulorho yohola wendlela kunye neendidi ezahlukeneyo zodonga lwekhethini kunye nezixhobo zentsimbi .
Inkampani ifumene isiqinisekiso soMvelisi woLwakhiwo lweZiseko zokuqala zentsimbi kuMbutho woLwakhiwo lwensimbi waseTshayina kunye noDidi lweS1 yoLwakhiwo loLwakhiwo lweSinyithi esivela eSwitzerland. Singayila kwaye siyila ngobuchule imisebenzi yensimbi evunyiweyo ngeMigangatho yesizwe efana ne-GB, BS, AS, EN, SAA kunye ne-CE. Inkampani ikwadlulisile isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lweMigangatho ye-ISO9001, isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lweNdalo ye-ISO14001, kunye nesiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lwezeMpilo noKhuseleko. Singabanikezeli bemveliso ababonelela ngemisebenzi yolwakhiwo yenkqubo yokukhupha izixhobo zamandla egesi kuMbane Jikelele weNkampani kunye nezixhobo zombane zakwaNokia. INkampani ikwangumthengisi owenza kunye nokufaka isikhululo sokuguqula iprojekthi yeHVDC kwiGridi kaRhulumente.
Kunyaka ophelileyo, inkampani yenze iiprojekthi ezininzi ezinefuthe ekhaya nakwamanye amazwe, ezinje ngezinyuko zentsimbi yeHuawei Sakata Base A9 kunye neprojekthi yokwakhiwa kwakhona kwe-A10, iShenzhen Futian Gymnasium Park, olona lwakhiwo luphambili lwe-B7 yokwakha ukusetyenziswa kwesikhululo senqwelomoya saseShenzhen , ibhulorho yentsimbi yabahambi ngenyawo kwi-Shenzhen Binhai Road, indawo yokuhlala yase-Guangdong Global, iZiko loQeqesho lwe-Flying Disk, izikhululo ezininzi ze-Express kaloliwe yeprojekthi yase-Guangzhou kunye ne-Zhuhai, i-Guangzhou BRT ibhulorho yabahambi ngeenyawo, iDongguan Yulan Opera - Isikhululo sebhasi yesikhululo seDongguan City, izikhululo zikaloliwe ezininzi Isiqithi saseHainan, iSitishi sebhasi iJiangxi Xinfeng, iBhulorho yentsimbi kunye neNdlela yabahambi ngeenyawo yeZikhululo zikaloliwe iZhaoqing, ulwakhiwo lwentsimbi ye CSSC Longxue base base, Honda Metal Technology (Foshan) Co., Ltd, Jiangmen public wharf logistics park, Guangzhou zhuhai Gree Air-Conditioner Isityalo, iShenzhen BYD isityalo esizenzekelayo, iDaya Bay CNOOC yipaseji yentsimbi, Shunxing Quarrying Co, Ltd -Dongsheng Group, Hengye Sanitary Prod i-ucts (iFujian) Co., Ltd, isikhululo sokuguqula iprojekthi ukusuka kwiGridi kaRhulumente eLhasa, Qingdao, Baoji, Xiangtan, Taizhou, Erodos njlnjl, iTheminali yeHong Kong West East Kowloon Project, ulawulo lweHK lokulawula umda weHongkong-Zhuhai-Macao Bridge Isikhululo sikaloliwe esihamba ngesantya esiphezulu kuMbindi Mpuma, Brunei Imperial Navy Base Factory, Singapore Marina Sand Hotel, Singapore Sentosa Museum, Sultan Savagin Passenger Greenhouses and Quarantine Centre project.
Emva kweminyaka emininzi yokusebenza okukhethekileyo kunye noqeqesho, Siye saqulunqa njengomboneleli wesakhiwo esinexabiso eliphantsi onokubonelela ngenkonzo epheleleyo kubathengi. Ukubambelela kwingcinga esekwe kumgangatho kunye nokujolisa kubathengi, kuxhomekeke kwizibonelelo zabasebenzi bobuchwephesha kunye nezixhobo zoomatshini ezipheleleyo, inkampani yomeleza amakhonkco angaphandle kunye nesikhokelo sangaphakathi, iqinisa ubuchule bezenzululwazi kunye nobuchwepheshe. Ngolawulo olupheleleyo kunye nenkqubo yokwakha, sinokubonelela kuyilo olupheleleyo, imveliso ukuya kufakelo lwesiza kubathengi basekhaya nabangaphandle. Kwaye siya kuphuhlisa kunye nomthengi ukuphuhlisa ulwakhiwo kunye nentsimbi yeemveliso zesakhiwo kwintengiso ekhaya nakumazwe aphesheya kwintengiso.